မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: မဗေဒါရဲ့ ဖြစ်သလိုစားသောက်စရာ...
အဟဲ... မယ်ဂုမိရဲ့ ပြောရင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် သနားလာပြီ။ ပိုစ့်လေးကိုသွားပြီး ကွန်မန့်ပေးမိတော့ အကြိုက်ချင်းတူနေလို့ဆိုပြီး TAG တာခံလိုက်ရပြီ.. အိန်း... ဒီတော့လဲရေးရတော့မပေါ့...
ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာက.. မဗေဒါက ထမင်းပဲကြိုက်တယ်.. ၁နေ့မှာ ထမင်းမစားရရင် ရင်တွေပူပြီးစိတ်တွေတိုနေတတ်တယ်.. ခေါင်းကလဲမူးသလိုလိုနဲ့ပေါ့.. အိမ်မှာ မုန့်ဟင်းခါး.. အုန့်နို့ခေါက်ဆွဲပဲချက်တဲ့နေ့ဆိုသူများတွေက ထမင်းလွတ်နေနိုင်ပေမဲ့.. မဗေဒါအတွက်တော့ ထမင်းချက်ပေးရတာပဲ.. ထမင်းစားရင်လဲ များသောအားဖြင့် ပုံမှန် ၂ပန်းကန်စားတယ်.. (ဟီး..ရှက်).. စားမကောင်းတဲ့နေ့ဆို ၁ပန်းကန်.. ဘယ်လောက်စိတ်ညစ်ညစ်. ဘယ်လောက်ဟင်းမကောင်းကောင်း ထမင်းတော့ဝင်တယ်.. ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ငါးကို အနံ့တောင်မခံနိုင်ဘူး.. ငါးနဲ့လုပ်တဲ့ မုန့်တော်တော်များများမကြိုက်ဘူး.. ဥပမာ.. ငါးမုန့်ကြော်.. မုန့်ဟင်းခါး..ရခိုင်မုန့်တီ.. နဲနဲကြီးလာတော့ အဲဒါတွေတော့စားလို့ရလာတယ်.. ငါးဟင်းတော့မကြိုက်သေးဘူး..ငါးနံ့ပျောက်တဲ့အထိ ကြွတ်နေအောင်ကျော်ထားတဲ့ငါးကြော်တော့စားလာတယ်.. အဲ..စကာင်္ပူလဲရောက်ရော ဂျီးများလို့မရဘူး..ရှိတာအကုန် ဓာတ်လေးပါးပဲဆိုပြီးတွယ်တာပဲ.. ဒီမှာ ငါးဈေးကြီးတော့ ငါးစားစရာတော့သိပ်မလိုဘူးပေါ့...မစားမနေရစားရမယ်ဆိုလဲ ၁ပန်းကန်ဝင်အောင်တော့တီးမှာပဲ..
မြန်မာပြည်မှာမဗေဒါရဲ့ ဖြစ်သလိုဆိုရင်တော့.. လမ်းထိပ်က ကုလားပဲဟင်းရယ်(နာမည်ကြီးတယ် အဲဒိချစ်တီးပဲဟင်းဆိုင်က)တိုးတိုးအာလူကြော်ရယ်နဲ့ဆိုရပြီ.. ထမင်းမိန်ပါ့.. ဒါမျိုးကျတော့ ဖြစ်သလိုဆိုပေမဲ့ ၂ပန်းကန်ဝင်တာပဲ..
စကာင်္ပူလဲရောက်ရော.. ပဲဟင်းနဲ့လဲဝေး.. အိမ်ထမင်းဟင်းနဲ့ဝေး.. သူတို့က ခေါက်ဆွဲတွေကို lunch လိုလဲစားတာပဲ.. မဗေဒါက နေ့လည်စာတို့ ညစာတို့ကို ထမင်းစားရမှာတင်းတိမ်တယ်.. ခေါက်ဆွဲက သားရေစာလို့ပဲသတ်မှတ်တယ်.. ဒီတော့ မဗေဒါအတွက် ဒီတရုတ်ထမင်းဆိုင်နဲ့ပဲ ၂ပါးသွားနေရတာပေါ့.. တနေ့လာလဲ ဒီဟင်း.. ဒီဟင်း.. အရည်သောက်မပါ..ဘာမပါ.. ကြာတော့ဝမ်းပါချုပ်လာရော..(ဘွာတေး.. ပြောပြတာ..စားတာရေးတာ ၀မ်းချုပ်တာပါပါလာပြီ).. မဗေဒါမှာ အကျင့်တစ်မျိုးရှိတယ်.. ကြိုက်တဲ့ဟာကို ဘယ်လောက်စားရစားရ..စားနိုင်တယ်.. မကြိုက်တဲ့ဟာကို အကြောင်းကြောင်းကြောင့်စားရရင်တောင်များများမစားနိုင်ဘူး.. တခါတလေလုံးဝမစားပဲနေတယ်..
အဲဒီတရုတ်ထမင်းဆိုင်က ဟင်းတွေကို ကြာတော့ စားရင်းနဲ့အန်တောင်အန်ချင်လာတယ်.. ထမင်းဆိုင်သွားရမယ်ဆိုရင်တောင် ဘာစားရမှန်းမသိလို့စိတ်ဖိစီးရတယ်...
စကာင်္ပူရောက်စ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကဆိုရင်တော့.. ပိုက်ဆံကလဲ အပိုမသုံးနိုင်ဆိုတော့.. ၃လုံး ၂ကျပ်ဆိုတဲ့ ပေါင်မုန့်နဲ့ပဲနေ့တိုင်း ၂ပါးသွားပြီး ညစာကို ဖြစ်သလိုစားတယ်.. ဗိုက်လဲပြည့်တယ်.. ဈေးလဲပေါတယ်.. တင်းတော့မတင်းတိမ်ဘူးပေါ့.. ထမင်းမှမဟုတ်တာ.. ကပ်စေးကနဲတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင်မသဓာဘူး..
ခုတော့ ကျောင်းလဲပြီး အလုပ်လုပ်နေပြိဆိုတော့.. တစ်ခါတစ်လေတော့ အပြင်မှာပဲ ကောင်းကောင်းဝယ်စားတယ်.. အမြဲတော့ မပြင်မှာမစားနိုင်ဘူး.. ဖေဖေမေမေ ဒီရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ နေ့တိုင်း အလုပ်ကိုထမင်းဘူးယူတယ်.. အိမ်ထမင်းအိမ်ဟင်းနေ့တိုင်းစားရတော့ ဗိုက်ခွေးနမ်းတာပဲ... သူတို့ပြန်သွားတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်တော့ အပျင်းပိုးက၀င်.. ၃လုံး ၂ကျပ်တန်ပေါင်မုန့်လဲ မစားနိုင်တော့ဘူး..သွေးကြီးသွားပြီဆိုတော့ (ချမ်းသာတာလူတွေမခံနိုင်ဘူးဆိုတာ ဒါကိုပြောတာ)..
အိမ်မှာ သူတို့မပြန်ခင်ချက်ပေးသွားတဲ့ ချဉ်ပေါင်တွေ..ငါးပိဆီကြော်တွေ မကုန်သေးရင်... အဲဒါတွေပဲ နေ့တိုင်းနွေးစားတယ်..
ချဉ်ပေါင်ဟင်းက မဗေဒါအကြိုက်လေ.. ဘယ်တော့မှမရိုးဘူး..
အဲဒါတွေမရှိရင်.. ဈေးကနေ မုန့်ညှင်းရွက်ဖြစ်ဖြစ်.. ကန်စွန်းရွက်ဖြစ်ဖြစ်.. ကြော်ရလွယ်တဲ့အရွက်တစ်မျိုးမျိုးကိုစားခါနီးမှ ဖြစ်သလိုကြော်စားလိုက်တယ်.. ကုန်သွားလို့ဗိုက်မ၀သေးလဲ ရေနဲ့ပဲဖြည့်လိုက်တော့တယ်.. ဖြစ်သလို ထမင်းစားရင် ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်.. ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းစားတယ်.. ဘာအရသာမှန်းမသိလိုက်ဘူး.. ပါးစပ်ထဲရောက်တာ ၀ါးပြီးမျိုချလိုက်တာပဲ.. ရုပ်ရှင်ထဲစိတ်ရောက်နေတော့လဲ သိပ်တော့ အခက်ခဲမရှိဘူး.. ဖေဖေမေမေရှိရင်တော့.. စားပြီး အချိုတည်းဖို့ အသီးကအဆင်သင့်.. ၁ယောက်ထဲကျန်ခဲ့ရင်တော့.. စားပြီး ပါးစပ်ကဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင်.. ဈေးသွားလဲ ဘာသီးဝယ်ရမှန်းကိုမသိဘူး.. စဉ်းစားရတာခေါင်းရှုပ်လို့.. မစားဖြစ်တာများတယ်.. ထမင်းစားချိန်လဲမမှန်ဘူး..
အလုပ်မရှိတဲ့ရက်ဆို နေ့လည်လောက်မှနိုးတယ်.. ဗိုက်မဆာမချင်း ဈေးဆင်းရမှာပျင်းလို့ မသွားဘူး.. ဗိုက်ဆာမှဆင်းဝယ်ပြီး.. ချက်တယ်.. အရမ်း အရမ်း double ပျင်းတဲ့နေ့ဆိုရင်တော့ ကြက်ဥ၂လုံးလောက်ကြော်ပြီး ရှိတဲ့ ငါးပိဆီကြော်နဲ့လွေးတယ်..
အိမ်မှာက ချဉ်ပေါင်ကြော်.. ငါးပိဆီကြော်က အမြဲရှိတယ်... မေမေဖေဖေတို့က မပြန်ခင်အားလုံးစီစဉ်ပေးသွားတတ်တယ်လေ..
အဲဒါတွေကုန်ခါနီးပြီဆိုရင်တော့.. ဖုန်းဖိုးကုန်ပြီမှတ်.. နေ့တိုင်းရန်ကုန်ဖုန်းဆက်ပြီး ဘယ်တော့ ပြန်လာမှာလဲမေးတတ်တယ်..
အိမ်မှာ မဗေဒါပဲအဲလိုလုပ်တာ.. အပျင်းကျတော့ကြီးတယ်.. ဟင်းကျတော့ ဂျီးများတယ်လေ.. အစ်မ၂ယောက်လုံးကအဲလိုမရှိဘူး.. သူတို့ဘယ်မှာ ဘယ်လိုစားမှန်းတောင်မသိဘူး.. သူတို့ကအပြင်မှာနေ့တိုင်းစားလဲ ကိစ္စရှိပုံမရဘူး.. အစ်မအကြီးကဟင်းချက်ကောင်းတော့..တစ်ခါတစ်လေလေးများ သူစိတ်ကောင်းဝင်တဲ့နေ့ဆို ချက်နေရင်တော့ ပွတာပဲပေါ့.. ဒါမျိုးဆို အပြင်ကစားလာပြီးရင်တောင် ထပ်စားချင်စားအုံးမှာ.. ဟဲ..ဟဲ..
မဗေဒါက ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်လဲမကြိုက်တော့ အခက်တွေ့တာပေါ့.. အဲဒါတော့ လုံးဝမစားနိုင်ဘူး.. တစ်ခါတစ်လေသူများစားတာ စားချင်စရာကောင်းရင်တော့ ၁လုပ်၂လုပ်ဝင်ဝင်ရှုပ်တတ်တယ်.. ၁ယောက်ထဲစားဆိုရင် မကုန်ဘူး.. အဲ... မဗေဒါစိတ်ရှိလက်ရှိစိတ်ကောင်းဝင်တဲ့နေ့ဆိုရင်တော့.. လက်ဘက်သုတ်နဲ့စားတယ်.. လက်ဘက်သုတ်ကို အဆင်သင့်ရောပြီး ထောင်းပြီးသားဆိုလုံးဝမကြိုက်ဘူး.. လက်ဘက်အသားအခါးကို ကိုယ့်ဘာကိုယ်ထောင်းပြီး အကြော်သက်သက်နဲ့သုတ်တာပဲကြိုက်တယ်.. အကြော်မှာလဲ ပဲခြမ်းကြော်တွေဘာတွေအများကြီးနဲမကြိုက်ဘူး.. ကြက်သွန်ကြော်..နှမ်း..ပုဇွန်ခြောက်ပဲ.. အဲဒီ၃ခုထဲက တစ်ခုခုလိုနေရင် မစားတော့ဘူး.. အထူးသဖြင့် ပုဇွန်ခြောက်.. မဗေဒါသုတ်တာနဲ့ မေမေသုတ်တာဘာကွာလဲတော့မသိဘူး..ကိုယ်သုတ်ပြီးရင် ဟာတာတာနဲ့တစ်ခုလိုအပ်နေတတ်တယ်.. ဟဲ.. နောက်တော့လဲသုတ်ပါများရင်တိုးတက်လာမှာပါ.. စိုးရိမ်နဲ့..
ခုတော့ အသက်ကလေးကလဲ ရလာပြီဆိုတော့.. ငယ်ငယ်ကထက်စာရင်တော့ တော်တော်များများစားလာတယ်.. ငယ်ငယ်ကမစားတဲ့..ရှမ်းခေါက်ဆွဲ.. ကြာဇံဟင်းခါး.. ကပ်ကြေးကိုက်..အဲလိုမျိုးတွေပေါ့..ခုတော့ကြိုက်လာတယ်.. ထူးစမ်းတယ်နော်.. ရှမ်းခေါက်ဆွဲကတော့ စကာင်္ပူရောက်စက အစ်မချက်တာကိုပဲကပ်စားနေရတော့ သူကရှမ်းခေါက်ဆွဲချက်ရင် ထမင်းထပ်ချက်ခိုင်းလို့မရဘူးလေ.. သူကဖေဖေမေမေလိုမဟုတ်တော့ ပြောလို့မရဘူး..(အဲလိုအနိုင်ကျင့်တာ..အဟင့်)..ဒီတော့ မဗေဒါကလဲ စိတ်ဘယ်လောက်ညစ်ညစ် အစားမပျက်တတ်ဘူးဆိုတော့.. စမ်းစားကြည့်ရင်နဲ့ ကြိုက်သွားတာ..သူချက်တာကလဲ ရှယ်နော်.. my sis က အချက်ကောင်းဗျ... ကြက်သားက နမ်းချင်းပါတယ်.. အမိုက်စား..ပြောရင်းစားချင်လာပြီ.. အဲဒိအကျင့်က ခုဆို ဆိုင်မှာရှမ်းခေါက်ဆွဲစားလို့ ကြက်သားကုန်တာနဲ့ ကျန်တာဆက်မစားတော့ဘူး..ထားခဲ့တာပဲ.. ဟီး....
my sis ချက်တဲ့ ဖြစ်သလိုဟင်းတွေထဲမှာ.. recommend ပေးချင်တာကတော့ ကန်စွန်းရွက်သုတ်တော့.. မဗေဒါလဲ တစ်ခါမှမကြားဘူးဘူး.. အရင်က အတူနေတဲ့အစ်မကြီးတွေသင်ပေးတာပဲ.. မဗေဒါ အစ်မက ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့လိုက်ပြီး စပ်စပ်လေးသုတ်လေ့ရှိတော့.. အာသွက်လျှာသွက်ပဲ.. ကောင်းပါ့.. ခုမဗေဒါအစ်မက အသက်ကြီးတဲ့သူတွေလို ပင်စင်ယူသွားပြီ.. ဟင်းမချက်တော့ဘူး.. ဘာလို့လဲသိလား.. ဖေဖေမေမေရောက်လာတော့ သူလဲချက်တော့ဘူး.. ညာခိုင်းချော့ခိုင်း..ချောက်ခိုင်း..ယောင်အောင် ကလိထိုးခိုင်းလဲချက်တော့ဘူး.. ဟီး..ဟီး... (ဘာမှမဟုတ်ဘူး..သူဒီပိုစ့်ကိုဖတ်မယ်မှန်းသိလို့ ပိုစ့်နဲ့လှမ်းပူဆာတာ.. ပိုင်တယ်ဟုတ်.. မချက်ကြွေးရင် ဘလော့မှာပြန်ပြောပြမယ်... ကွိကွိ).. မဗေဒါသူငယ်ချင်းတွေဆိုချစ်ဖို့အရမ်းကောင်းတာ.. မဗေဒါထက် မဗေဒါအစ်မကိုဖားနေကြတာလေ.. ပြောပြောချင်ဘူး.. ဟီး.. ဟီး.. (ပြီးရင် ကွန်မန့်မှာအဆော်ခံရတော့မယ်ထင်တယ်)..
(ဒါတွေသိလို့.. မဗေဒါရဲ့လျှိူ့ဝှက်ချက်ဆိုပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောပဲ ဘလော့လုပ်ထားတာ.. ခုတော့ သူတို့အားလုံးသိကုန်ကြတော့ သူတို့အတင်း ဒီလောက်ပဲခုတ်တော့မယ်.. ဟဲ.ဟဲ.. peace !!)..
အော်.. အရည်ဆိုရင်တော့ မဗေဒါ မကြိုက်တာတော်တော်များတယ်. အထူးသဖြင့်မဗေဒါက gas ပါတဲ့ အအေးတွေမကြိုက်ဘူး.. coke, 7up, sprite စသည်ဖြင့်ပေါ့.. ပြီးတော့ Tea တွေလဲမကြိုက်ဘူး.. green tea, Jasmine Tea အဲလိုမျိုးတွေပေါ့.. ဒီတော့ များသောအားဖြင့် can drink တွေမသောက်ဘူး.. အသီးဖျော်ရည်တော့သောက်တယ်.. မဗေဒါ အသောက်များဆုံးကတော့ ကျွဲရိုင်း.. ဟဲ..ဟဲ (ရွှေမြန်မာပီသတာလေ)..
ကော်ဖီ လက်ဘက်ရည် mood ပေါ်မူတည်ပြီးသောက်တယ်.. အစာမစားပဲတော့မသောက်ဘူး.. ရင်တုန်လို့..
ခုပြောသွားတဲ့ သောက်တဲ့ အရည်တွေထဲမှာတောင်.. ကုန်အောင်မသောက်နိုင်တာကများတယ်.. ကျွဲရိုင်းဆိုလဲမကုန်ဘူး.. အရည်ကို ရေငတ်ပြေရုံ တစ်ငုံ၂ငုံလောက်သောက်ပြီးရင် ဆက်မသောက်ချင်တော့ဘူး.. ရေတောင် မလွှဲသာလို့သောက်နေရတာ.. ရေသောက်ပြီး ရှူးရှူးပေါက်ရတာ အလုပ်ရှုပ်လို့.. ခရီးသွားရင် ကားပေါ်မှာ ဘာမှမစား..ဘာမှမသောက်ဘူး.. emergency က ဖြစ်တတ်လွန်းလို့..
တစ်ခါတစ်လေ.. ရေကငတ်နေပေမဲ့ လူက ရေမသောက်ချင်တဲ့ အခါမျိုးတောင်ရှိသေးတယ်... ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှာစိုးလို့.. ခုတော့ သတိထားပြီးသောက်ပေးနေရတယ်..
ကဲ.. ဖြစ်သလိုစားသောက်ခြင်းကို ပြောလိုက်တာ.. မဆိုင်တာတွေပါ.. အကုန်အစုံပါသွားပြီ... ဆော်ရီးနော်... ဘာရေးရမှန်းမသိလို့.. ရေးရင်း စိတ်ထဲအာရုံလာတာတွေ ရေးချလိုက်တာ...
အစ်မတွေ သူငယ်ချင်းတွေအဆူမခံရအောင် ဒီပိုစ့်ရေးပြီးရင် ဘုရားရှေ့သွားပြီး မေတ္တာပို့ထားမှ.... ဘိုင်ဘိုင်..
Posted by mabaydar at 3:51 PM
ကျမကလည်း ချဉ်ပေါင်ရွက်တော့ ကြိုက်တယ်သိလား။ ထပ်တူပြန်ပြီ။ အကြိုက်ချင်းက။ :P နည်းနည်းတောင် ကြောက်လာပြီ။ :D
အစားအသောက်ပဲ တူပါစေနော်။ ကျန်တာတွေပါ တူကုန်ရင်တော့ ဒုက္ခ။
ဟိ ဟိ။ စတာနော်။ စိတ်ဆိုးရဘူးနော်။
10/08/2008 11:57 PM
မဗေဒါရေ... အစ်မရေးပြီးပြီဆိုတော့... တက်ဂ် တော့ဘူးနော်...ဟီး..
Your Eldest Sis said...
Don't worry! I will cook for you when mom & dad go back this time .... Since you are so rich, you prepare to pay for all the cooking expenses. Is itadeal? ha ha ha :P
10/09/2008 8:50 PM
U all see??? That's the true colour of my sister............
You know how busy your sis is. I'll sacrifice my time and cook for you. See how lovely I am.
Skate tutorial are really useful,ma baydar.Yes , you can learn from that tutorial step by step.
We go and skate often.If you want to join , ask ko HLK or ko paing or ko ffox.
10/10/2008 8:36 AM